(Kugcine ukubuyekezwa On: 17/07/2020)
Ukuhamba ngezitimela kulunge kakhulu futhi ne-Eco-Friendly Way to Travel. This sihloko eyabhalwa sokuba umuntu afunde izindlela zemininingwane Hamba nge- Londoloza Isitimela, Amathikithi Eshibhile Eshibhile Iwebhusayithi Emhlabeni.
IRoma idolobha elihle ukuvakashela eYurophu kubahambi abaphezulu. Idolobha laseRoma lasendulo, ezikhangayo kakhulu, amahhotela, nezindawo zokudlela zitholakala ngokuphelele kubantu abadala esihlalweni sabakhubazekile. Lokhu kusho ukuthi imigwaqo yedolobha yonke inemizila yezihlalo ezinamasondo, nomuzi ngokwawo uyisicaba, ngakho-ke akunandaba nezinga lakho lokuqina, uzokuthola kulula kakhulu ukuhamba uzungeze.
Ngenkathi iRoma igcwala impela kwisizini ephezulu, uma uhamba off-isizini, ekwindla, Ngokwesibonelo, uzothola iRoma cishe ngokuphelele kuwe. Ngaphezu kwalokho, amahhotela nezintengo zokuhamba zivame ukwehla kwisizini, Ngaphezu kwalokho, akudingeki ukhathazeke ngokuqasha imoto, ngoba ungahamba kalula ukuya eRoma usuka noma yikuphi lapho uya khona eYurophu ngesitimela. Akukho lutho olungelula ukwedlula travel isitimela ezitimeleni eziphakeme zanamuhla nezithuthukile zikaTrenitalia. Ngaphezu kokududuza kanye nensiza enhle yesitimela, ungakwazi ukujabulela izaphulelo ezikhethekile kumathikithi wesitimela wabantu abadala.
UDuomo noLeonardo De Vinci 'I-Supper Yokugcina' benza iMilan ipharadesi labathandi bezobuciko kanye nomlando. Ngaphandle kokuba yigugu lobuciko bokwakha, UMilan unomusa kakhulu kubahambi abaphezulu futhi uye wawina ngisho a 2016 Umklomelo Wokufinyelela we-EU. Ngakho-ke iMilan ingelinye lamadolobha amahle ukuvakashela eYurophu kubahambi abaphezulu.
Uma uphase ama-60 wakho futhi ulungele impilo enhle, khona-ke uzoba nesikhathi esimangalisa ngokuphelele eMilan. I cuisine Italian, le izakhiwo emangalisa of Basilicas, zobuciko, futhi iminyuziyamu izokukwenza uzizwe njengobukhosi. Lapho eseMilano, kufanele ujoyine isigaba sokupheka se-pasta ngoba asikephuzi kakhulu ukuthi sifunde iresiphi yesithelo se-pasta esiphelele ukuze ukwazi ukuphinda ubuye nge-la dolce vita ekhaya.
Isiteshi sesitimela esiphakathi eBruges cishe 10-20 amaminithi’ ukuhamba usuka enkabeni yedolobha, ngakho-ke ungahamba noma kuphi eBelgium nase-UK.
Iholide le-spa eBaden-Baden iyindlela enhle yokuvakasha yabahambi abaphezulu eYurophu. Ijubane lokuthula, ukwelashwa kwe-spa yamaminerali nodaka, izingadi ezinhle njengama-Paradies, dala ucezu lwezulu. Nokho, uma nithanda ukuhlala nisebenza ngamaholide, bese kuba khona imidlalo yegalufu kanye namaqembu ezemidlalo e Baden-Baden ngawe ukuvakasha.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “7 Amadolobha Ahamba Phambili EYurophu Ukuhambela Abahambi Abakhulu” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit nge isixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/europe-visit-senior-traadors/ ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)